पैट्रिक Kluivert: जीवनी, तथ्याङ्क, फोटो
पैट्रिक Kluivert मा डच राजधानी मा जुलाई 1976 को पहिलो दिन थियो। बाल्यकाल देखि, त्यो एक फुटबल खेलाडी बन्ने र सबै भन्दा संसारमा लोकप्रिय थियो जो फुटबल "Ajax" स्कूल, प्राप्त को सपना देख्यो। स्कूल मा एक स्थानको लागि प्रतियोगिता पागल थियो। प्रत्येक वर्ष, कोच मात्र धेरै हजार देखि दर्जन मान्छे को एक जोडी लिएको।
म पहिलो स्कूल आउँदा पैट्रिक अनुसार, त्यो धेरै डराएको थियो। कारण ठूलो भएको पुर्खाहरूले गर्न नेतृत्व जो, देश भर देखि मानिसहरूको नम्बरमा, Kluivert बस परित्याग र छोड्न चाहन्थे। तर उहाँले बसे र स्वीकार गरिएको थियो।
मा पहिलो कसरत प्रशिक्षण मा एक हप्ताको समय को एक जोडी, तर त्यसपछि लोड बाहिर नाटकीय वृद्धि। साथै, क्लब साधारण विद्यालयमा शिक्षक संग काम गरेको छ। यदि ती आफ्नो अध्ययन मा कठिनाइ थियो उद्देश्य, छोराछोरीलाई शिक्षक मदत थियो। यो एक फुटबल स्कूलमा प्रशिक्षण सुरु बिना सामान्य उच्च विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न बच्चाहरु को लागि एक मौका दिए।
1994 मा, Kluivert को इरेडिवाइजी मा "Ajax" आफ्नो debut गरे। "Ajax" सधैं एक मौका प्रतिभा धेरै दिइएको छ, तर पनि एम्स्टर्डम क्लब गरेको प्रगति को स्तरअनुसार पैट्रिक धेरै सजिलै देखिने थियो तथ्यलाई द्वारा प्रतिष्ठित गरिएको छ। आफ्नो क्यारियर मौसम को सुरु मा खेल को सबै भन्दा उहाँले पीठ मा सुरु भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तेजी विकास गर्न थाले।
Kluivert र शायद यो जाडो लागि प्रमुख खेलाडीहरू को सूचीमा पायो तापनि उहाँले च्याम्पियनशिप मा सबै भन्दा राम्रो स्कोरर एक थिए। ड्रप स्ट्राइकर नेदरल्यान्ड टोली को राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षक को ध्यान आकर्षित। राष्ट्रिय टोलीमा Debut 16 नोभेम्बर मा स्थान लियो।
को Dutchman को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्याच वसन्त 1995 मा भयो। यसलाई "मिलान" विरुद्ध च्याम्पियन्स लिग अन्तिम थियो। को एम्स्टर्डम क्लब इटालियनहरू को सुरक्षा दरार गर्न प्रयास, तर सबै प्रयासहरू निष्फल थिए। र सामान्य समय को अन्त हुँदा5मिनेट, Kluivert, प्लेयर "मिलान" गल्ती फाइदा लिइरहेको, म्याच मा मात्र गोल गरेका थिए।
अन्तिम पछि सबै हामी जो पैट्रिक Kluivert छ थाहा छ। एम्स्टर्डम को फुटबल खेलाडी बासिन्दा संग फोटो हरेक चरण मा गर्न चाहन्थे। तर पैट्रिक लक्ष्य बस यो यति लोकप्रिय बनाएको रन थाह, र खेलको स्तर र Rijkaard Overmars यसलाई अझै कठिन काम गर्नुपर्छ। कि सिजन मा, "Ajax" उहाँले भाग जसमा सबै प्रतियोगिताहरु जित्यो। दुई घरेलू ट्राफियों साथै डच युरोपेली सुपर कप र क्लब विश्व कप जित्यो।
"Ajax" मात्र होइन तारा सिर्जना गर्ने एक क्लब थियो, तर पनि तिनीहरूलाई बेचे। 1995 देखि 1997 को लागि, च्याम्पियन्स लिग जित्यो जो लगभग सम्पूर्ण संरचना, बेच गरिएको छ। को 1996/97 सिजन मा, पैट्रिक "अन्तर" गर्न संक्रमण भविष्यवाणी, तर अन्त मा, त्यो "मिलान" मा थियो।
त्यतिबेला "मिलान" संकट समयमा अनुभव छ, र क्लब मालिक भएको छ जसले नयाँ कोच बाह्र नयाँ खेलाडीहरू को खरिदका लागि पैसा विनियोजन गरेको छ, साथै नियुक्त फाबिओ Capello। तर यो छनौट प्रजनन परिणाम ल्याएको छ छैन। यस मौसममा मिलान 13 स्थान लियो।
पैट्रिक Kluivert सेरी ए मा देखाउन छैन उहाँले डच च्याम्पियनशिप मा प्रदर्शन जो यो खेल। यो बाहेक, Kluivert फुटबल सम्बन्धित थिएनन् कि समस्या धेरै थियो। उहाँले एक व्यक्ति मृत्यु जसमा दुर्घटना को एक सदस्य, भयो। यो Dutchman समयमा उहाँले सामुदायिक सेवा को 240 घण्टा सुनाइसकेको थियो।
कि फुटबल आफ्नै प्रशंसक बु गर्न थाले पछि। क्लब डच स्ट्राइकर संग involuntary बिदामा यसो, तर यो पैट्रिक "मिलान" को प्ले छोटो-बस्ने थियो स्पष्ट थियो।
भ्यान Gaal भ्यान Gaal ... ... र फेरि भ्यान Gaal
Kluivert राम्रो आकार मा वसन्त रन र फ्रान्स भयो जो विश्व च्याम्पियनशिप, मा डच राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएको थियो। पैट्रिक राष्ट्रिय टोलीमा सबै भन्दा राम्रो थियो, तर "मिलान" आफ्नो फिर्ती मा, उहाँले नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थियो। नयाँ प्रशिक्षक क्लब आए। यो डच एक प्रमुख खेलाडी बन्न कठिन हुनेछ स्पष्ट भयो। अल्बर्टो Zaccheroni जर्मन हस्ताक्षर Oliver Bierhoff। पैट्रिक Kluivert - जर्मन स्ट्राइकर को आगमन क्लब अन्य अगाडी छोड्न छ चाहनुभएको। 27 मिलान र केवल6लक्ष्य - इटालियन क्लब प्रभावित भएन मा डच स्ट्राइकर तथ्याङ्क।
1997 मा, लुई वैन Gaal सँगै Kluivert "Ajax" संग र बायाँ। एम्स्टर्डम पछि, उहाँले "बार्सिलोना" को टाउको कोच भयो जहाँ स्पेन, गए। आफ्नो नयाँ स्थिति मा, त्यो तुरुन्तै डच फुटबल क्लब को pupils खोजी गर्न थाले। स्थानान्तरण विन्डो अन्तिम घण्टामा, "मिलान" र "बार्सिलोना" स्थानान्तरण Kluivert मा सहमत छन्। नयाँ टीम, पैट्रिक आफ्नो सामान्य फुटबल खेल्दै थाले।
1999 मा, क्याटालान क्लब को मामला खराब थिए। टोलीमा स्पष्ट underdog संग खेल मा अंक गुमाए। यो भ्यान Gaal को निष्कासन गर्न पुगे। तर डच विशेषज्ञ को छोटो अवधि पछि उहाँले "बार्सिलोना" को मुख्य कोच को पोस्ट फर्के। 2003 मा, त्यो बल्ल स्पेनिश क्लब बाँकी।
अनुभव र युवा उमेर
आफ्नो 26 वर्ष Kluivert ठूलो अनुभव भएको थियो। उहाँले विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू मा भाग छ। अक्सर, यस्तो ट्रयाक रेकर्ड ती खेलाडीहरू आफ्नो क्यारियर को twilight पहिले नै भएका छन्। पैट्रिक, तीन च्याम्पियनशिप प्ले युरोप र संसारको च्याम्पियनशिप मा भाग लिए, क्लब "Ajax" संग सबै ट्राफियों जित्यो। Klyuyvert Patrik - यी सबै merits एक व्यक्ति छ। लक्ष्य राष्ट्रिय टोली लागि धेरै महत्त्वपूर्ण स्ट्राइकर हुन्। उहाँले टीम 1996 युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई को समूह चरण पार गर्न मदत गरे।
2000 मा युरोपेली च्याम्पियनसिप Kluivert जीत आशा राखेका थिए। द्वारा र ठूलो, पैट्रिक एक्लै सबै विरोधीको सामना, तर डच राष्ट्रिय टीम को सेमिफाइनल खेलमा इटाली पिटे सकेन। कि पछि, टोलीमा अर्को प्रमुख विघ्न भोगे - डच 2002 मा विश्व कप लागि योग्य गर्न असफल भयो। यो टोली को अभाव जापान र दक्षिण कोरिया, अनिच्छुक मा आयोजित थियो जो च्याम्पियनशिप, गरे।
पैट्रिक Kluivert र टोली
चेक गणतन्त्र विरुद्ध मिलान Kluivert लागि पहिलो थियो। एक debut लक्ष्य उहाँले आयरल्याण्ड विरुद्ध खेलमा गोल गरेका थिए। एउटै खेलमा उहाँले आफ्नो पहिलो डबल गरे, र नेदरल्यान्ड 2-0 ले जित्यो।
डच फुटबल 2000 'सुनको पुस्ता' मा युरोपेली च्याम्पियनशिप को समूह चरण उच्चतम स्तर मा आयोजित। Kluivert गेट, डेनमार्क र फ्रान्स, साथै एक युगोस्लाभिया विरुद्ध ¼ फाइनल मा टोपी-चाल मा लक्ष्य चिन्ह लगाइयो। पाँच लक्ष्य पैट्रिक च्याम्पियनशिप मा विवाद स्कोरर मा Savo Milosevic संग पहिलो स्थान साझेदारी र प्रतियोगिताको को प्रतीकात्मक टोली मा प्राप्त गर्न अनुमति दिनुभयो। साढे फाइनल मा हल्याण्ड इटाली को राष्ट्रिय टोलीलाई हराएको र 3-4 ठाउँमा साझेदारी। अङ्क 0-0 र पेनाल्टी मा इटालियनहरू संग समाप्त मुख्य समय सही साबित - 3-1।
युरोपेली च्याम्पियनशिप टोली घर एक पटक अस्वीकार गर्न थाले। टोलीमा पछिल्लो विश्व कप 2002 उड्यो र पैट्रिक सुरु लामबद्ध आफ्नो स्थान गुमाए। यूरो 2004 मा Kluivert को गए कहिल्यै फुटबल मैदान। 2004 मा, कोच थियो मार्को वैन Basten, अब राष्ट्रिय टोली Patrika Klyuyverta गर्न भनिएको छ जो।
आफ्नो क्यारियर समयमा Kluivert7क्लब र6च्याम्पियनशिप प्ले। कुल मा, त्यो 149 गोल जसमा 343 मिलान प्ले। को "Ajax" Kluivert कचौरा नेदरल्यान्ड र च्याम्पियनशिप, को Intercontinental कप, च्याम्पियन्स लिग, युरोपेली सुपर कप मा तीन पटक जित्यो संग। 1997 मा, पैट्रिक "बार्सिलोना" मा स्पेनका च्याम्पियन भयो। यसलाई आफ्नो घर देश बाहिर आफ्नो मात्र पदक थियो। को "PSV" उहाँले नेदरल्यान्ड को च्याम्पियनशिप जीत व्यवस्थित गर्दा आफ्नो अन्तिम पदक पैट्रिक Kluivert, 2007 मा जित्यो।
आफ्नो पहिलो सिजन उहाँले देश मा सबै भन्दा राम्रो जवान खेलाडीहरू थियो, र हल्याण्ड राष्ट्रिय टोलीलाई एक कल प्राप्त। युरोप मा सबै भन्दा राम्रो जवान खेलाडी 1995 मा यो पनि पैट्रिक Kluivert भयो। खेलाडी को जीवनी यसको विशिष्टताको संग प्रस्ट हुन्छ। उमेर 18 मा, त्यो मुख्य हडताल शक्ति टोली थियो, र 27 मा यो संरचना समावेश छैन। राष्ट्रिय टोलीका लागि सबै Patrik Klyuyvert 79 मिलान खर्च र 40 गोल गरेको छ। 2008 मा, Kluivert को फुटबल क्यारियर पूरा गर्न आफ्नो निर्णय घोषणा।
तलब मेसीले संसारमा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी रूपमा कमाता?
Artyom Delkin: फुटबल क्यारियर hitter
Styuart Dauning - एक पौराणिक कथा "Middlesbrough"
सेबस्टियन Deisler: जीवनी, खेल क्यारियर
कारणहरू र उपचार: बच्चा को मसूडों मा अल्सर
डेस्कटप घडी कसरी चयन गर्ने? तालिका घडी कसरी स्थापित गर्ने? घडीहरु को संयन्त्र
अर्को चिनियाँ मुद्रा, या केवल हङकङ डलर
के आमाबाबुले बच्चालाई पहिलो स्नान तयार, जान्नु आवश्यक?
प्रसिद्ध रूसी कलाकार। सबै भन्दा प्रसिद्ध कलाकार
अक्टोबर पैलेस (कीव): इतिहास र वास्तुकला